China SHEHWA-370-DTH yakasarudzika inokambaira yakaiswa pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba kuchera rig Mugadziri uye mutengesi | Xuanhua
SHEHWA-370-DTH yakasarudzika inokambaira yakaiswa pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba rekuchera rig
SHEHWA-370-DTH yekuchera rig inoshandiswa zvakanyanya mumigodhi yakavhurika yakaita sesimende, simbi, migodhi yemarasha, makomba, kuputika kwekuchera gomba mune njanji, mugwagwa mukuru, kuchengetedza mvura, hydropower nemabasa ekuvaka ekudzivirira kwenyika.
seperated crawler yakaiswa pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba kuchera rig
SHEHWA-370-DTH yekuchera rig inoshandiswa zvakanyanya mumigodhi yakavhurika yakaita sesimende, simbi, migodhi yemarasha, makomba, kuputika kwekuchera gomba mune njanji, mugwagwa mukuru, kuchengetedza mvura, hydropower nemabasa ekuvaka ekudzivirira kwenyika. Aperture mugomba saizi renji iri 90-178mm, iyo inogona kuve yakagadzirirwa nemhando dzakasiyana dzemhepo compressors kuti uone yakanyanya kumanikidza DTH kuchera.
1. Off-mutoro kugona
Chimiro chemuviri chakagadzirwa negiravhiti shaft mudziyo, iyo inoderedza kusagadzikana kwekukwikwidza panguva yekufamba, inowedzera kusimba kwekubatana pakati pomuviri nemugwagwa, uye inoita kuti chassis yechirairi rig igare yakasimba uye igadzikane. Kana kuyambuka yakatenuka, uye pakureba kukwira anogona kusvika 35 dhigirii.
2. Michina yokuderedza
Yakatwasuka-zino inoderedza ine yakaderera tembiricha inokwira, yakakwira kutakura-inotakura uye hwakareba hupenyu hwebasa, iyo inogona kugadzirisa rotary kumhanya maererano nedombo kuomarara. Rotary musoro yakagadzirirwa Eton hydraulic mota kuti igone kugadzikana basa mamiriro. Iyo yakagadzirirwa nekusimbisa kushamiswa kwekubatana kwemajoini kudzikisira iko kukanganiswa kwekuita kwesimba kwemakomba ekuchera kukuvadza Rotary yokuderedza.
3. Guruva kubvisa mudziyo
Guruva muunganidzi anotora tekinoroji yekumanikidza yekupusha guruva yekuchenesa, ine yakasimba guruva yekuchenesa kugona, yakakwira kubvisa guruva kushanda, yakaderera emission yevasungwa, yakaderera mweya leakage mwero, yakaderera simba kudyiwa, yakatsiga uye yakavimbika mashandiro, uye inodzivirira hutano hweanoshanda. Nemhando yepamusoro firita yezvinhu, iro guruva rinobvisa kushanda uye hupenyu hwebasa hunovimbiswa.
● ZVINONYANYA KUKOSHA
Kushushikana neMhepo Kumanikidza 1.7-2.5 Mpa
Turning torque 3280N
Yekumhanyisa kumhanya 0-110Rpm
Kusimudza simba 20KN
Zvishoma nezvishoma mumatope furemu famba Kuruboshwe 54 ° / Kurudyi 50 °
Zvishoma nezvishoma mumatope furemu pitching 135 °
Kuchera boom famba Kuruboshwe / Kurudyi 45
Drilling tiguu pitching yakatenderera 22 ° / 65 °
Kugona giredhi 35 °
Injini Kugadzira YUCHAI Diesel nezvimwe
Rated simba 73.5 / 92 Kw
Divi 5750 * 2170 * 2300mm
Pashure: SHEHWA-360-DTH yakasarudzika inokambaira yakagadzika pamusoro pe hydraulic pasi-iyo-gomba rekuchera rig
Zvadaro: SHEHWA-380-DTH Pneumatic Kuchera Rig